Orinasa Tsaradia: nitondra mpandeha 326 000 tao anatin’ny herintaona | NewsMada
Orinasa Tsaradia: nitondra mpandeha 326 000 tao anatin’ny herintaona
Feno herintaona izao ny orinasa Tsaradia, najoro ny 2 jolay 2018. Tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny Air Madagascar nananganana ny Tsaradia, miantoka ny zotra anatiny. Nampahafantarina, omaly, ny tale jeneraly vaovao, Rafanomezantsoa Andriamamonjy, nandray ny asany ny 16 aogositra 2019. Tsy mora ary mitohy ny fanarenana ny Air Madagascar miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka aminy, ny Air Austral.
Anisan’ny paikady iray ny nananganana ny Tsaradia, miantoka ny zotra ato anatiny, ho fampandrosoana ny fizahantany sy ny fihariana ankapobeny, hanomezana fahafaham-po ny mpandeha rehetra. Tao anatin’izay herintaona izay, mpandeha 326 000 ny notaterin’ny Tsaradia amin’ny zotra Antananarivo – Mahajanga, Nosy Be, Antsiranana, Sambava, Maroantsetra, Sainte Marie, Toamasina, Morondava, Toaliara, Taolagnaro. Miasa amin’ireo zotra ireo ny ATR-72 dimy sy ny Twin Otter roa.
Ezaka iray ny fanajana fotoana, nofaritana mitovy tanjona amin’ny Air Madagascar, ho 85 %, miantoka ny zotra any ivelany. Tratran’ny Tsaradia amin’izay fanajana fotoana izay ny 80%. Noho ny antony teknika matetika ny mandiso ny fotoana, toy ny fikojakojana: misy ara-potoana, misy tsy ampoizina. Tsy maintsy atao izany tsy hisian’ny loza. Mametraka fepetra momba izany koa ny Oaci (Organisation de l’aviation civile internationale), tsy maintsy tanterahina ny toromarika avy any aminy.
Haba isan-karazany mameno tapakila iray
“Ezahinay ny manome tolotra ho zakan’ny mpanjifa rehetra, araka ny sokajiny avy. Marihina anefa fa eo amin’ny 47 % hatramin’ny 55 % ny tena vidin’ny tapakila, ankoatra izay ny haba isan-karazany: haban-tseranana, TVA, haba amin’ny vidin-tsolika. Tsy miankina aminay io haba io, ary tsy mitovy, ohatra, ny haban-tseranana, ny solika miankina amin’ny vidiny. Tsy maintsy lanjalanjaina ireo rehetra ireo tsy hisy fiantraikany any amin’ny mpandeha”, hoy ny tale jeneralin’ny Tsaradia, Rafanomezantsoa Andriamamonjy.
Ho fanatsarana ny tolotra mamaly ny tinadin’ny mpanjifa mitombo hatrany, mihevitra ny Tsaradia hanampy ATR iray sy Twin Otter roa, amin’ny volana oktobra. “Hiantohana izay fanajana fotoana izay ny fanampiana ny isan’ireo fiaramanidina ireo, raha sendra misy olana teknika”, hoy ny tale jeneralin’ny Air Madagascar, Razafimaharo Rolland Besoa. “Tsaradia tafita, midika fahombiazan’ny Air Madagascar. Betsaka ny fanamby amin’izany izay efa nofaritana iaraha-miasa tsy misy fetra”, hoy Rafanomezantsoa Andriamamonjy.